The supporting team to flood victims led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), provided the relief supplies starting from 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.
(1)On 22.7.2015 and 28.7.2015, the team went and supported relief which cost twenty five million Ks to Kanbalu, Kawlin and Wintho region
(2)On 4.8.2015, the team delivered the supply items that cost twelve million Ks to Lapanwe village, Ywarkhaing village , and the shelter in Pwintphyu township
(3)On 6.8.2015, the team flew to Kalay region with clothes and rice that cost ten million Ks to donate to flood victims
(4)On 8.8.2015, the team donated supplies which cost sixty million Ks to Konezaung, Monezalae village in Pwintphyu township, and also donated robes and food to about 300 monasteries and nunneries.
(5)On 11.8.2015, the team delivered various items that cost about nine million Ks to Kan Phyu village, Kyattoywe village,Hintharma village, in Sintkoo township
(6)On 13.8.2015, the team went and donated items to Moekwae and Meelaungkyaung village in Yaysakyoe township. The cost for donated items for that areas was twenty million Ks.
ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း(မန္တလေး)မှ ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့် ရုံပိုင်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း) ခေါင်းဆောင်သော သဘာဝဘေး ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သည် (၂၂.၇.၂၀၁၅) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁) ၂၂.၇.၂၀၁၅ တွင် ကန့်ဘလူ၊ ကောလင်း၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်ရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ကျပ်သိန်း (၂၀၀) ခန့်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
(၂) ၂၈.၇.၂၀၁၅ တွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အပါအဝင် သိန်း (၅၀) ဖိုးခန့် ကောလင်းမြို့သို့ ထပ်မံ လှူဒါန်း
(၃) ၄.၈.၂၀၁၅ တွင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် လက္ပနွယ်ရွာ၊ ရွာခိုင်ရွာနှင့် စက်မှုလယ်ယာ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို့လည်းကောင်း သိန်း (၁၂၀) တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ
(၄) ၆.၈.၂၀၁၅ တွင် ကလေးမြို့သို့ မြန်မာ့လေကြောင်းခရီးဖြင့် သိန်း (၁၀၀) ခန့် တန်ဖိုးရှိသော ဆန် နှင့် အဝတ်အထည်များး
(၅) ၈.၈.၂၀၁၅ တွင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကုန်းဇောင်း၊ မုန်ဇလယ် ကျေးရွာများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် သီလရှင် ကျောင်းပေါင်း (၃၀၀) သို့ ကျပ် သိန်း (၆၀၀) ဖိုးခန့်
(၆) ၁၁.၈.၂၀၁၅ တွင် စဉ့်ကူးမြို့နယ်ရှိ ကမ်းဖြူ - ကြက်တူရွေး၊ ဟင်္သာမကျေးရွာသို့ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ကျပ် သိန်း( ၉၀) ဖိုးခန့် လှူဒါန်း
(၇) ၁၃.၈.၂၀၁၅ တွင် ရေစကြိုမြို့နယ်၊ မိုးကွဲရွာနှင့် မီးလောင်ကျွန်းကျေးရွာများသို့ ကျပ်သိန်း (၂၀၀) တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ
(၈) ၁၇.၈.၂၀၁၅ နေ့တွင် ဟင်္သာတခရိုင်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရေဘေးသင့်ရွာများသို့ ကျပ် သိန်း (၆၀၀) တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ